Iràna · Desambra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Iràna · Desambra, 2012
Tantara mikasika ny Iràna tamin'ny Desambra, 2012
Fahalalahàna miteny23 Desambra 2012
Naraha-maso akaiky nandritra ny 650 andro ireo mpirotsaka amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena teo aloha sy lehiben'ny Hetsika Maitso, Mir-Hossein Mousavi, sy Mehdi Karroubi, miaraka amin'ny vadin'i Mousavi, Zahra Rahnavard. Nitodika tany amin'ny media sosialy ny vondronà Iraniana mpampiasa aterineto mba hanairana sy hanosehana ny famoahana an'ireo voafonja noho ny fanehoan-kevitra...
Misy Manafika Ny Iraka Diplaomatikan'i Iran
Afganistana11 Desambra 2012
Notafihan'ny Iraniana sy ny Afghana noho ny antony samihafa, tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay, ny iraka diplaomatikan'i Iran manerantany.
Fahalalahàna miteny10 Desambra 2012
Tsy mba malaza amin'ny fahalalahana maneho hevitra i Iran na amin'ny fihetsiketseham-bahoaka eny an-kalamanjàna. Saingy manjaka ao kosa ny zavakanto an-tanàn-dehibe; raha mandravaka ireo rindrin'ny tanàn-dehibe sasany ny sary natao mivantana tamin'ny rindrina, kanto avy amin'ny fanambatambarana poti-bato (mozaika) ary ny hosodoko hafa ‘nekena’ (nahazo alalana) na dia tsy miharohary...
Fahalalahàna miteny06 Desambra 2012
Feno hafaliana ny tontolom-bilaogy Iraniana rehefa voatatitra fa namarana ny fitokonana tsy hihinan-kanina ilay mpisolovava sady migadra noho ny fanehoan-kevitra Nasrin Sotoudeh [mg] 49 andro taty aoriana.
Fahasalamàna04 Desambra 2012
Tato ho ato, nametra-panontaniana momba ny andraikitry ny governemantany amin'ny tsy fahampian'ny fanafody ry zareo Iraniana. Mitana toerana betsaka ny famaizana, saingy toraka izany koa ny tsy fahaiza-manao sy ny kolikoly. Ity lahatsoratra ity dia manangona ireo fanehoankevitra momba ny olan'ny fahasalamana avy amin'ireo Iraniana.